लियोनल मेस्सी « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: लियोनल मेस्सी
संसारको सबैभन्दा धनी फुटबलर को ? शायद तपाईंको अनुमान गलत हुनेछ ! पत्याउनु हुन्न यो पढ्नुस्
काठमाडौं, माघ १२ । धेरैलाई लाग्ला संसारको सबैभन्दा धनी फुटबलर क्रिष्चियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी मध्ये नै एक हुनु पर्दछ । विश्व फुटबल मञ्चमा यी दुई यस्ता प्रतिष्पर्धी हुन् जसको
मेस्सी दर्शक बनेको खेलमा बार्सिलोना रोकियो बराबरीमा
काठमाडौं, पुस १५ । स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनालाई एइबरले १–१ को बराबरीमा रोकेको छ । खेलमा लियोनल मेस्सी मैदान बाहिरै थिए । मेस्सी बिनाको
काठमाडौं । अर्जेन्टाईनी फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सीले एउटै क्लबबाट सर्वाधिक गोल गर्ने ब्राजिलीयन फुटबल हस्ती पेलेको कीर्तिमान तोडेका छन् । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट ६४४ गोल गर्दै मेस्सीले पेलेको कीर्तिमान तोडेका
फिफाको वर्ष खेलाडीमा रोनाल्डो, मेस्सी र लेवान्डोस्कीको मनोनयन
काठमाडौं, मंसिर २७ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्ष पुरुष खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको सूचीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सी र रोबर्ट लेवान्डोस्की पुरुष खेलाडीको
च्याम्पियन्स लिगको तालिका सार्वजनिकः मेस्सी र रोनाल्डो समूह चरणमै भिड्ने
काठमाडौं । युरोपियन क्लब फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता युएफा च्याम्पियन्स लिगको समुह चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । युरोपेली फुटबल महासंघ युएफाले हिजो निकालेको ‘ड्र’ अनुसार लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो
काठमाडौं । इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलले लियोनल मेस्सीलाई आफ्नो क्लवमा भित्र्याउने दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । क्लबका प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले मेस्सी अनुबन्धको दौडमा आफुहरु नरहेको प्रष्ट पारे ।
काठमाडौं । फुटबलर लियोनल मेस्सीले पुनः बार्सिलोना छाड्न चाहेको दोहोर्‍याएका छन् । स्पेनिस पत्रिका मार्काका अनुसार मेस्सीले बार्सिलोनाका पदाधिकारीसँग भेट गरी आफू क्लब छाड्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै मार्ग प्रशस्त